Ch4मार्क – 2माछा
घर / बाइबल / मार्क को सुसमाचार / Ch4मार्क
4:1 अनि फेरि, उहाँले समुद्र द्वारा सिकाउन थाल्नुभयो. र एक ठूलो भीड उहाँलाई भेला भएको थियो, यति भनेर, एक डुङ्गामा चढाई, उहाँले समुद्र मा विराजमान थियो. र सम्पूर्ण भीड समुद्र साथ देशमा थियो.
4:2 र उहाँले धेरै कुराहरू Parables तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आफ्नो सिद्धान्त मा:
4:3 "सुन्नुहोस्. हेर, छर्ने छर्न गए.
4:4 अनि उहाँले रोपेको बेला, केही बाटो साथ गिर, र हावा को चरा आए र यसलाई खाए.
4:5 यद्यपि साँच्चै, अरूलाई Stony जमीन मा गिर, जहाँ यो धेरै माटो छैन. र यो चाँडै उठेर, किनभने यो माटो को कुनै गहिराई थियो.
4:6 र सूर्य गर्दा पुगेको थियो, यो झुलसे थियो. र किनभने यो कुनै मूल थियो, यो दूर withered.
4:7 अनि केही thorns बीचमा फसे. र thorns अप भयो र यो suffocated, र यो फल उत्पादन भएन.
4:8 र केही राम्रो माटो मा गिर. र यो कि अप भयो फल निस्कने ल्याए, र वृद्धि, र yielded: केही तीस, केही साठी, र केही एक सय। "
4:9 अनि उहाँले भन्नुभयो, "जसले सुन्न कान छ, उहाँलाई सुन्न गरौं। "
4:10 र उहाँले एक्लै हुँदा, बाह्र, जो उसलाई थिए, दृष्टान्तमा बारेमा उसलाई प्रश्न.
4:11 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तिमीलाई, यो परमेश्वरको राज्यको रहस्य थाहा दिइएको छ. तर ती जो बाहिर छन्, सबै Parables मा प्रस्तुत छ:
4:12 'तेसैले, देखेर, तिनीहरूले देख्न सक्छ, र बुझ्ने छैन; र सुनेर, तिनीहरूले सुन्न सक्छ, र बुझ्न; कुनै पनि समयमा नत्र तिनीहरूले परिवर्तित हुन सक्छ, र आफ्नो पाप तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ। ' "
4:13 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तपाईं यो दृष्टान्त बुझ्न नगर्नुहोस्? अनि त, तपाईंले सबै Parables कसरी बुझ्न?
4:14 जसले sows, शब्द sows.
4:15 अब बाटो साथ भएकाहरूलाई छन्, जहाँ शब्द छरिएको छ. र जब तिनीहरूले सुनेका, शैतानले चाँडै आउँछ र शब्द दूर लिन्छ, जो आफ्नो हृदयमा छरिएको थियो.
4:16 अनि यस्तै, त्यहाँ Stony जमीन मा छरिएको थियो गर्नेहरू. यी, जब तिनीहरूले शब्द सुनेका, तुरुन्तै gladness यसलाई स्वीकार.
4:17 तर तिनीहरू कुनै मूल छ, र त्यसैले तिनीहरू सीमित समयको लागि हो. र जब अर्को कष्ट र सतावटको किनभने शब्द को खडा, तिनीहरूले चाँडै टाढा गिरावट.
4:18 र thorns बीचमा छरिएको छन् जो अरूलाई छन्. यी शब्द सुन्न गर्नेहरू,
4:19 तर सांसारिक कार्यहरू, र धन को छलछाम, र अन्य कुराहरू बारे इच्छा प्रविष्ट गर्नुहोस् र शब्द निसासिनु, र यो फल बिना प्रभावकारी छ.
4:20 र राम्रो माटो मा छरिएको भएकाहरूलाई छन्, जो शब्द सुन्न र यसलाई स्वीकार; र यी फल फलाउन: केही तीस, केही साठी, र केही एक सय। "
4:21 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "कसैले अर्डर एक टोकरी अन्तर्गत वा ओछ्यानमा अन्तर्गत ठाँउ मा बत्ती संग प्रविष्ट दिनुहुन्छ? यो एक lampstand मा राखिएको थियो?
4:22 त्यहाँ केही लुकेको छ कि छैन प्रकट हुनेछ. न त कुनै पनि गोप्य गरियो, यसलाई सार्वजनिक हुन सक्छ कि बाहेक.
4:23 जो कोहीले सुन्न कान छ भने, उहाँलाई सुन्न गरौं। "
4:24 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तपाईं के सुन्न विचार. जो उपाय तपाईंलाई बाहिर मापन छन्, यो तपाईं फिर्ता मापन गरिनेछ, र अधिक तपाईं थपियो गरिनेछ.
4:25 जसले छ लागि, उहाँलाई यो दिइएको गरिनेछ. र जसले छैन, उहाँबाट उहाँले लगिएको छ पनि के पर्छ हुन। "
4:26 अनि उहाँले भन्नुभयो: "परमेश्वरको राज्य यस जस्तै छ: एक मानिस देशमा मा बीउ डाली थियो भने यो छ.
4:27 र उहाँले सोता र उहाँले खडा, रात र दिन. र बीउ germinates र बढ्छ, हुनत त्यो छैन थाह छ.
4:28 पृथ्वीको लागि सजिलै फल फलाउँछ: संयंत्र पहिलो, त्यसपछि कान, कान मा पूर्ण अन्न अर्को.
4:29 र जब फल उत्पादन गरिएको छ, तुरुन्तै उनले Sickle बाहिर पठाउँछ, किनभने फसल आइपुगेको छ। "
4:30 अनि उहाँले भन्नुभयो: "के हामी परमेश्वरको राज्यको तुलना गर्नुपर्छ लागि? वा के दृष्टान्त हामी यसलाई तुलना गर्नुपर्छ गर्न?
4:31 यो तोरी बीउ एक अन्न जस्तै छ जो, यो पृथ्वीमा छरिएको छ जब, जो पृथ्वीमा हो सबै बीउ भन्दा कम छ.
4:32 र जब यो छरिएको छ, यसलाई बढ्छ र सबै बोट भन्दा ठूलो हुन्छ, र यो ठूलो शाखा उत्पादन, हावा को चरा यसको छाया बाँच्न सक्षम छन् कि यति त। "
4:33 र धेरै यस्ता Parables संग उहाँले तिनीहरूलाई वचन बोले, धेरै तिनीहरूले सुन्न सक्षम थिए.
4:34 तर उहाँले एक दृष्टान्त बिना कुरा थिएन. अहिलेसम्म अलग, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सबै कुराहरू बताए.
4:35 र त्यस दिन, साँझ आइपुगेका थिए जब, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "हामीलाई पार गरौं।"
4:36 र भीड खारेज, तिनीहरूले ल्याए, ताकि उहाँले एक डुङ्गा थियो, र अन्य डुङ्गा उसलाई थिए.
4:37 र एक ठूलो हावा आँधी आयो, र छालहरू डुङ्गा भन्दा भङ्ग, डुङ्गा भरिएको भइरहेको थियो भनेर.
4:38 र उहाँले डुङ्गा को कडी थियो, एक तकिया मा सुतिरहेको. र तिनीहरूले उहाँलाई जगाए र तिनलाई भने, "शिक्षक, यसलाई हामी डरावना छन् भनेर चासोको विषय छैन?"
4:39 र माथि बढ्दो, उहाँले बतासलाई हप्काउनुभयो, र त्यो समुद्र भन्नुभयो: "मौन. सुन्न सकिन्छ। "अनि हावा भएनन्. र एक ठूलो सौहार्द भयो.
4:40 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तपाईं किन डराउँछन्? तपाईं अझै पनि विश्वास कमी गर्न?"अनि तिनीहरूले ठूलो डर संग प्रहार गरेका थिए. र तिनीहरूले आपसमा भने, "कसले तपाईंलाई यो छ लाग्छ, हावा र समुद्र दुवै उहाँलाई पालन कि?"